မိန်းက လေး များ online shopping တွေ အ ရမ်း အားပေး မယ် ဆိုရင် ဒါလေး ဖတ်ပြီး သတိ ထား ကြပါ…. – Shwe Ba
ဒီ နေ့ မှ�...
မိန်းက လေး များ online shopping တွေ အ ရမ်း အားပေး မယ် ဆိုရင် ဒါလေး ဖတ်ပြီး သတိ ထား ကြပါ….
Shwe MM | September 3, 2020 | Knowledge | No Comments
ပြီးခဲ့တဲ့ November 11ရက်နေ့ ဟာ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ တကယ်ကို အကြီးဆုံး shopping holiday ကြီးပါ ၊ ပြီးတော့ Singles Day လို့လည်း ခေါ်ဆိုကြပါတယ် ။အဲ့နေ့မှာ ဆိုရင် online shopping website တွေကနေဆိုရင် ပရိုမိုးရှင်းချတဲ့ အစီအစဉ် တွေနဲ့ အတော်လေး ကိုရှုတ်ရှက်ခတ်နေခဲ့ တာပါ ။ သို့ပေမဲ့လည်း လျှော့ဈေးတွေချတိုင်းလည်း ကိုယ့်ဝင်ငွေကိုမကြည့်ပဲ
အသုံးအဖြုန်း များနေမယ် ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခရောက်ကြမှာပါ ။ ထို့ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ Luzhou မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် 29 နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဟာ သူ၏ဇနီးသည်ဖြစ်သူအသက်29နှစ်အရွယ် Zhan ရဲ့ Singles Day နေ့မှာ အသုံးအဖြုန်းကြမ်းခဲ့ တဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ် ။ဖြစ်စဉ်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က ည10အချိန်ခန့်မှာ 33ထပ် အမြင့်ရှိတဲ့တိုက်ပေါ်မှ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာခုန်ချဖို့ကြိုးစားနေတာကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ရဲဌာနသို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ် ။
ရဲအရာရှိများက အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီး စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်နေ တဲ့ အမျိုးသားကို ဖျောင်းဖျပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ မေးမြန်းစစ်ဆေး ခဲ့ချိန်မှာတော့ Wang ဟာ ဇနီးဖြစ်သူ online shopping မှာအသုံးဖြုန်းများခဲ့ တာကြောင့် အကြွေးများစွာ တင်နေခဲ့ပြီး ၊ဇနီးဖြစ် သူက ဒီဇိုင်နာ နာမည်ကြီးတဲ့အိတ်တွေ ၊ ရေမွှေးတွေ ၊ အဝတ်အစားတွေ နဲ့ အခြားအရာတွေ မှာပါ ဝယ်ယူခဲ့တာကြောင့်
300,000 yuan (မြန်မာငွေ သိန်6း00ကျော်) သုံးဖြုန်းခဲ့ တာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။ယခုတစ်ခေါက်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်တော့ကြောင်း နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဟာ အမြဲလိုလို online shopping မှာသာ သုံးဖြုန်းနေပြီး ကလေးမွေးပြီးနောက်မှာ ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ် ။အရင်နှစ် Singles Day နေ့မှာ 200,000 yuan (မြန်မာငွေ သိန်း400 ကျော်) သုံးဖြုန်းခဲ့သေးကြောင်း နှင့် ထပ်မဝယ်ဖို့ သူမက ကတိပေးထားပေမဲ့လည်း ကတိမတည် ခဲ့ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
ထို့အပြင် Wang မှာ တစ်လ ဝင်ငွေမှာ အနည်းငယ်သာရရှိပြီး သူမရဲ့ အကြွေးကိုဆက်ပေးဖို့ အတွက် နားမလည်နိုင် တော့ဘဲ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ online shopping ပေါ်အရူးအမူးဖြစ်နေသောစိတ်ကြောင့်ကိုယ့်ကို အဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ရဲအရာရှိတွေရဲ့ ဖျောင်းဖျမှုကြောင့် Wang ကို စိတ်ဖြေနိုင် ခဲ့ပြီး ၊ ရဲအ ရာရှိများက Wang ကိုနေအိမ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတော့တယ် ။ ထို့အပြင် ဇနီးဖြစ်သူ ကလည်း
နောက်ထပ်မည်သည့် အရာမှ ထပ်ပြီးဝယ်မည် မဟုတ်ကြောင်း သန္နိဋ္ဌာန်ချခဲ့တဲ့အပြင် ကတိ လည်းပေး ခဲ့ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် Wang ဟာ သူမရဲ့အကြွေးများကို လည်း ပြန်ဆပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ပွီးခဲ့တဲ့ November 11ရကျနေ့ ဟာ တရုတျ နိုငျငံရဲ့ တကယျကို အကွီးဆုံး shopping holiday ကွီးပါ ၊ ပွီးတော့ Singles Day လို့လညျး ချေါဆိုကွပါတယျ ။အဲ့နမှေ့ာ ဆိုရငျ online shopping website တှကေနဆေိုရငျ ပရိုမိုးရှငျးခတြဲ့ အစီအစဉျ တှနေဲ့ အတျောလေး ကိုရှုတျရှကျခတျနခေဲ့ တာပါ ။ သို့ပမေဲ့လညျး လြှော့ဈေးတှခေတြိုငျးလညျး ကိုယျ့ဝငျငှကေိုမကွညျ့ပဲ
အသုံးအဖွုနျး မြားနမေယျ ဆိုရငျတော့ ဒုက်ခရောကျကွမှာပါ ။ ထို့ကွောငျ့ တရုတျနိုငျငံ Luzhou မွို့မှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ 29 နှဈအရှယျ အမြိုးသားဟာ သူ၏ဇနီးသညျဖွဈသူအသကျ29နှဈအရှယျ Zhan ရဲ့ Singles Day နမှေ့ာ အသုံးအဖွုနျးကွမျးခဲ့ တဲ့လုပျရပျကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုအဆုံးစီရငျဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့ပါတယျ ။ဖွဈစဉျမှာတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျက ည10အခြိနျခနျ့မှာ 33ထပျ အမွငျ့ရှိတဲ့တိုကျပျေါမှ အမြိုးသားတဈယောကျဟာခုနျခဖြို့ကွိုးစားနတောကို တဈစုံတဈယောကျက ရဲဌာနသို့အကွောငျးကွားခဲ့ပါတယျ ။
ရဲအရာရှိမြားက အခငျးဖွဈပှားရာ နရောသို့ရောကျရှိလာပွီး စိတျခံစားမှုပွငျးထနျနေ တဲ့ အမြိုးသားကို ဖြောငျးဖပြေးခဲ့ကွပါတယျ ။ မေးမွနျးစဈဆေး ခဲ့ခြိနျမှာတော့ Wang ဟာ ဇနီးဖွဈသူ online shopping မှာအသုံးဖွုနျးမြားခဲ့ တာကွောငျ့ အကွှေးမြားစှာ တငျနခေဲ့ပွီး ၊ဇနီးဖွဈ သူက ဒီဇိုငျနာ နာမညျကွီးတဲ့အိတျတှေ ၊ ရမှေေးတှေ ၊ အဝတျအစားတှေ နဲ့ အခွားအရာတှေ မှာပါ ဝယျယူခဲ့တာကွောငျ့
300,000 yuan (မွနျမာငှေ သိနျ6း00ကြျော) သုံးဖွုနျးခဲ့ တာ ဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ ။ယခုတဈခေါကျမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ မဟုတျတော့ကွောငျး နှငျ့ ဇနီးဖွဈသူ ဟာ အမွဲလိုလို online shopping မှာသာ သုံးဖွုနျးနပွေီး ကလေးမှေးပွီးနောကျမှာ ပိုမိုဆိုးရှားခဲ့ကွောငျးသိရှိရပါတယျ ။အရငျနှဈ Singles Day နမှေ့ာ 200,000 yuan (မွနျမာငှေ သိနျး400 ကြျော) သုံးဖွုနျးခဲ့သေးကွောငျး နှငျ့ ထပျမဝယျဖို့ သူမက ကတိပေးထားပမေဲ့လညျး ကတိမတညျ ခဲ့ကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ ။
ထို့အပွငျ Wang မှာ တဈလ ဝငျငှမှော အနညျးငယျသာရရှိပွီး သူမရဲ့ အကွှေးကိုဆကျပေးဖို့ အတှကျ နားမလညျနိုငျ တော့ဘဲ ဇနီးဖွဈသူရဲ့ online shopping ပျေါအရူးအမူးဖွဈနသေောစိတျကွောငျ့ကိုယျ့ကို အဆုံးစီရငျဖို့ကွိုးစားခဲ့တာဖွဈကွောငျး ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ ။ကံကောငျးစှာနဲ့ပဲ ရဲအရာရှိတှရေဲ့ ဖြောငျးဖမြှုကွောငျ့ Wang ကို စိတျဖွနေိုငျ ခဲ့ပွီး ၊ ရဲအ ရာရှိမြားက Wang ကိုနအေိမျသို့ပွနျလညျပို့ဆောငျပေးခဲ့ပါတော့တယျ ။ ထို့အပွငျ ဇနီးဖွဈသူ ကလညျး
နောကျထပျမညျသညျ့ အရာမှ ထပျပွီးဝယျမညျ မဟုတျကွောငျး သန်နိဋ်ဌာနျခခြဲ့တဲ့အပွငျ ကတိ လညျးပေး ခဲ့ပါတယျ ။ ထို့ကွောငျ့ Wang ဟာ သူမရဲ့အကွှေးမြားကို လညျး ပွနျဆပျပေးမညျဖွဈကွောငျး ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။
Why eat so much food, but why are you hungry for so long?
ဆန်ေ ဆးရေ နဲ့ ခေါင်းလျှော်ဖြစ်ေ အာင် လျှော်ကြည့်ပါ
နေ အိမ်တွင်း မှာ မ စိုက် သင့် တဲ့ ” နဂါး စက်ဂ မုန်း “
မိန်းကေ လးတွေ ကို အာချောင် စနောက်ပြောင်သော ယောက် ကျား လေး တိုင်း သိ ထား သင့်သည့် ဥပဒေများ
ပရိသတ် တွေအတွက် ONLINE ပေါ်က နေ STAY HOME ဘယ်က စလဲအသေ အချာရှင်းပြလိုက် တဲ့ ကိုပေါက် နဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ် တို့ရဲ့ အခွီ ဗီဒီယို
နေပြည်တော် ရွေးကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းထွေး ၏ နေ အိမ် ဗုံးသီးဖြင့် အပစ် ခံရ
ဘုရင် စနစ် ကို ဘယ်တော့ မှ ဖျက်သိမ်း မှာ မဟုတ် တဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံ နဲ့ အကြီး အကျယ် ဆန္ဒပြ နေရခြင်း အကြောင်း အရင်း
ဒီ နေ့ မှာ ပဲ အ သက် (၂၁)နှစ် ပြည့် သွား ခဲ့ ပြီဖြစ် တဲ့ Myanmar Idol ပြိုင် ပွဲ ဝင်ေ ဟာင်း ချမ်းမြေ့မောင်ချို
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ခြင်မှတဆင့် ကူးစက်သည့် ဆိုးရွားသော ရောဂါ တစ်မျိုး ထပ်မံ ပျံ့နှံ့မှု ဖြစ်ပေါ် နေ
နေပူ ကြီး ထဲ မှာ အကြာကြီး စောင့်ခိုင်း ထား လို့ စိတ်ဆိုး နေတဲ့ ခေးကြီး လု